Ukuboniswa kwe-LED egobile kwahlukile kwinqwelomoya ekhokelwa yinqwelomoya, zinokuhambelana ngokugqibeleleyo nemeko yokufaka kwaye zinokudityaniswa ngokupheleleyo kwimvelaphi yokufaka. Banokuyila ukuba babe ne-radian eyahlukeneyo ngokungqinelana nemvelaphi yokufaka, bavumelane ngokugqibeleleyo nobume besakhiwo. Zisoloko zinemfashini ngakumbi kunomboniso oqhelekileyo okhokelwayo ngenxa yomphezulu ogudileyo wecambered. Zikwabhetyebhetye kwaye zinembonakalo ebanzi. Ngenxa yescreen esihlaziyiweyo kunye nesihlaziyiweyo, ukusetyenziswa kwezixhobo ezimbalwa zokukhanyisa ukukhanya, ubomi benkonzo eyandisiweyo, iindleko nazo zincitshisiwe kakhulu.
Iziboniso ze-LED ezigobileyo zinokuhlelwa kwiindidi ezininzi, ezinje ngomboniso wekhonkrithi ojikeleze umhlaba kunye nemiboniso yomphezulu odibeneyo, imiboniso ejikeleze indawo ejikeleziweyo kunye nembonakalo yomphezulu ovaliweyo. Iimodeli zisetyenziswa ngokubanzi njengomboniso wonxibelelwano kwiinkampani ezisebenzayo, iingcali zonyuselo, abathengisi, ababonisi, abaphathi bamaziko oluntu kunye neengcali zoqeqesho. Ukunyusa uphawu, ukwazisa ngemveliso kunye nonxibelelwano ngolwazi lweshishini kudlale indima entle kakhulu ekukhuthazeni.
Iindlela zokuyila kunye nokwenza ijika ezibonisiweyo ezibonisiweyo zahluka kakhulu ngokwendlela eyahlukileyo. Irediyasi ibaluleke kakhulu xa sisenza isigqibo ngendlela yokuyila inkqubo yokuvelisa.
1.Xa irediyasi inde kunemitha, sinokwenza nje ukuba ikhabethe ibeyinto emile kwaye ime nkqo, xa sibahlanganisa, kufuneka silungelelanise i-engile phakathi kweekhabhathi ezimbini ezikufuphi ngokulawula ivalve elawula i-engile.
2.Ukuba i-radian imfutshane, ikhabhathi kufuneka yenziwe ukuba ibe ligophe, kufuneka silumke xa sidibanisa iimodyuli.
Ukuba i-radian imfutshane kune-0.5 yemitha, kufuneka siyile imodyuli ekhethekileyo, ezi modyuli kufuneka zibe yimicu emi nkqo. ngaphandle, kufuneka senze isakhiwo sentsimbi ukuba ijika.